Fieldboom: Foomamka Casriga ah, Daraasadaha, iyo Kediska | Martech Zone
Suuqa dalabyada foomku aad buu mashquul u yahay. Waxaa jiray shirkado hareeraha ka jira oo gacanta ku haya horumarinta foomka muddo ka badan toban sano oo shabakadda ah, laakiin tiknoolajiyada cusubi badanaa waxay leeyihiin waayo-aragnimo aad u sarreeya, adeegsiyo macquul ah, iyo tan isku-dhafan. Waa wax fiican inaan arko arimahan oo aad u horumarsan.
Hal hogaamiye ayaa jira Fieldboom, oo astaamaheeda ay ka mid yihiin:
Tuubbada Jawaabta - Ku dar jawaabta su'aal hore iyada oo qayb ka ah su'aal cusub ama ku saabsan Mahadsanid shaashadda.
Jawaabta Dhibcaha - Ku dhibco dadka ku saleysan jawaabaha oo muuji bogga Mahadsanid bogga ama cinwaanka URL dib u cusbooneysiiso iyadoo ku saleysan dhibcahooda.
Gaaritaanka API - Soo-gal Fieldboom ee soo-saaraha dhameystiran ee API si uu u riixo oo u jiido jawaabaha, u abuuro warbixinno qaas ah iyo in ka badan.
xaqiijinta - Si otomaatig ah ugu dir xaqiijin, waad ku mahadsantahay ama talaabooyinka xiga ee emayl ugu dir qof kasta oo buuxiya foomkaaga ama sahamintaada.
Editor - Ku dhiso foomam iyo baaritaanno adoo adeegsanaya tifaftiraha barta-gujinaya daqiiqado yar gudahood. Looma baahna naqshad ama xirfado farsamo.
Fayl Soo rar - - U fududee dadka inay ku soo rogaan faylalka foomamkaaga, oo ay ku jiraan PDF-yada iyo noocyada faylasha ee waaweyn.
Isdhexgalka - Si otomaatig ah iskudir jawaabahaaga CRM, emaylka softiweerka ama 750+ barnaamijyo kale oo dhowr guji ah.
Calaamadaha Abuur oo ku dheji sumadaha jawaabaha. Tusaale ahaan, waad kala sooci kartaa raadadka kuleylka, Kululaanta iyo Qabowga si aad ula socoto dabagal fudud.
Notifications - La ogeysii jawaabaha cusub adoo adeegsanaya wadiiqooyin fara badan oo ay ku jiraan emaylka, Slack iyo ogeysiisyada desktop.
Options - Qabso taariikhaha ballamada iyo waqtiyada, Dhibcaha Dhiirrigeliyaha Net, iyo xulashooyinka kale ee barnaamijka la qorsheeyay.
Lacagaha - Abuur xeerar qiimo gaar ah oo salka ku haya dhibcaha jawaabta oo waxaad ku qaadataa lacag bixinta adigoo isticmaalaya Stripe ama Paypal.
waxkabadalka - Kordhi sicirka dhammeystirka fariin soo dhaweyn ah oo loogu mahadnaqo dadka leh farriinta gaarka ah markay dhammeeyaan.
Hagaajinta - U dir dadka websaydhkaaga, balooggaaga ama dukaankaaga internetka markay dhammeeyaan foomkaaga ama sahamintaada.
Warbixinta - Eeg isbeddellada iyo fikradaha dhammaan jawaabaha adoo adeegsanaya dashboorkeenna warbixineed ee xooggan iyo jaantusyada.
Tixgelinta - Dhammaan sahannada iyo su'aalaha waxay ku eegaan oo ku dareemaan aaladda moobaylka ama kaniiniga ah.
Ka bood caqliga - Isticmaal caqli bood si aad u beddesho waxa ay dadku u arkaan marka xigta, iyadoo lagu saleynayo jawaabta ay ka bixiyaan su'aasha taagan.
Fieldboom waa u fududahay qof walba inuu isticmaalo, hadana awood ku filan si loo abuuro otomaatiyado casri ah oo kaa caawin doona kobcinta ganacsigaaga si dhakhso leh.
Xulashada Mobilada Fieldboom
Lambarka Mobilada Fieldboom
Fieldboom Mobile Upload
Fieldboom Mobile Suulka
Fieldboom Mobile Subscribe
Isku day Fieldboom si bilaash ah!
Tags: ka jawaab tuubooyinkajawaabta dhalintabeerboomfoomka apisamee isdhexgallacag bixinta foomkafoomka dib u habeynwarbixinta foomkafoomamkanatiijada dhiirrigelinta netlacagtapaypalsu'aalahacalaamadeynta jawaabtafoomamka jawaabta lehka bood caqligaFoomamka Casriga ahkarbaashsahan
Lahadli karo: Dhis, Raadso, Tijaabo, iyo Falanqaynta Barnaamijyada Gudbinta ee Ecommerce
Evolution of Optimization Optimization: Iyadoo Qaar Ka Mid Talooyin SEO Bilaash ah